နားရွက်သန့်ရှင်းရေးကိုစိတ်စွဲလမ်းသူလတ်ဆတ်တဲ့သူနှင့်တွေ့ဆုံပါ - သတင်း
မင်းသမီး Emma McGuigan ကသူမရဲ့သူငယ်ချင်းတွေရဲ့နားကနေမှောင်မိုက်ပြီးညစ်ပတ်တဲ့ earwax တွေကိုဆွဲထုတ်တာကစိတ်ကျေနပ်မှုကိုရရှိစေပြီးသူစိမ်းတွေကိုညစ်ပတ်ပေရေတဲ့နားရွက်တွေကြားမှာမြင်တဲ့အခါသူတို့နားရွက်ကိုမသန့်စင်နိုင်လို့အနာပျောက်သွားစေပါတယ်
စာနယ်ဇင်းပညာကိုလေ့လာသင်ယူသောမင်းသမီး Emma သည်အဆိုးရွားဆုံး earwax ရှိသည့်ကျောင်းရှိယောက်ျားတစ်ယောက်နောက်တွင်ထိုင်နေစဉ်သူမနားတွင်ညစ်ပတ်နေသည့်ပြwithနာရှိကြောင်းသိသောအခါအသက် ၁၀ နှစ်သာရှိသေးသည်။ မင်းသမီး Emma က The Tab Cardiff သို့ပြောကြားခဲ့သည် - ကျွန်ုပ်နေ့စဉ်နေ့တိုင်းသူ့နားရွက်ကိုသန့်ရှင်းအောင်လုပ်နေတာ။ ယင်းကသူမအနေဖြင့်အခြားသူများကသူမအကြောင်းကိုစဉ်းစားမိမည်ကိုစိုးရိမ်သောကြောင့်သူမနားရွက်များကိုသတိထားမိကာသူတို့ကိုစွဲလမ်းစွာသန့်ရှင်းရေးလုပ်ခဲ့သည်။ သူမက“ ငါပြIနာတစ်ခုရှိခဲ့တာကိုပထမဆုံးသဘောပေါက်လိုက်ပြီ။
အဘယ်ကြောင့်ငါဒီတော့ fuck ဆိုတဲ့စိတ်ဓာတ်ကျနေပါတယ်
အခြားသူများ၏နားရွက်များကိုသန့်ရှင်းရေးလုပ်သောအခါမင်းသမီး Emma သည်သူတို့လုံးဝသန့်ရှင်းနေစေရန်သေချာစေရန်သူမ၏ဖုန်းပေါ်ရှိလက်နှိပ်ဓာတ်မီးအင်္ဂါကိုပင်အသုံးပြုသည်။ သူမကဤသို့ပြောခဲ့သည် -“ လူတွေဟာညစ်ပတ်နားရွက်တွေကြားမှာအရမ်းတုန်လှုပ်နေတယ်၊ ​​နေ့တိုင်းငါမပြတ်မစင်ရှင်းလင်းတယ်။
စာနယ်ဇင်းသမားကဆက်ပြောသည်မှာ - ကျွန်ုပ်၏သူငယ်ချင်းအများစုကိုသူတို့၏နားများကိုသန့်ရှင်းနိုင်သလားဟုကျွန်ုပ်မေးသည်။ သူတို့ငြင်းဆန်သည့်အချိန်အများစုသည်ကျွန်ုပ်ကိုရူးသွပ်စေသည်။ သူတို့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာအညစ်အကြေးတွေအများကြီးရှိနေတယ်၊
Emma ဝန်ခံသည်မှာသူတို့ကသူမ၏နားကိုသန့်ရှင်းစေ။ ဖယောင်းများများထွက်လာသောအခါကျွန်ုပ်သည်ကျွန်ုပ်ဘဝတစ်လျှောက်လုံးတွင်ကျေနပ်စရာအကောင်းဆုံးအရာဖြစ်သည်။ အထူးသဖြင့်ထူးဆန်းပြီးမှောင်နေသည့်အခါ၊ အများကြီးသန့်စင်သူတို့ထဲကရတဲ့!
အဆိုပါ 20 နှစ်အရွယ်ရဲ့ရည်းစားပင်အမ်မာရဲ့ဝါဂွမ်းဘူးသီး၏အမျက်တော်ခံစားခဲ့ရသိရသည်။ မင်းသမီး Emma said: ငါ့ရည်းစားသည်သူ၏နားရွက်ကိုစိုက်ကြည့်ခြင်းရပ်တန့်ရန်ငါ့ကိုကားထဲတွင်ပြောပါလိမ့်မယ်မဟုတ်ရင်ငါထွက်ရရန်ရှိသည်လိမ့်မယ်, ငါတောင်ငါစိုက်ကြည့်တယ်သဘောပေါက်ကြဘူး!
အမ်မာဘာမှရောဂါရှာဖွေတွေ့ရှိခြင်းမရှိသေးပေ, ဒါပေမယ့်သူမနေဆဲစက်ဆုပ်ရွံရှာဘွယ်သောရောဂါ, ရောဂါရှာဖွေတွေ့ရှိသို့မဟုတ်မချင်ပါတယ်အဖြစ်ကတစ် ဦး ခြားနားချက်အများကြီးလုပ်လိမ့်မည်ဟုသော်လည်းအဖြစ်မခံစားရဘူး။ အဆိုပါလတ်ဆတ်သောမှတ်ချက်ပေး: ငါအပတ်တိုင်းသူတို့ကိုသန့်ရှင်းရေးတစ်ဆင့်ပြီးတစ်ဆင့်သူတို့ကိုဖိအားပေးလိမ့်မယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ငါ့အမေကငါ့အစ်ကိုနှင့်အစ်မ၏နားရွက်သန့်ရှင်းရေးကနေငါ့ကိုပိတ်ပင်ထားသည့်အခါအများဆုံးအစွန်းရောက်အခြေအနေတွေထဲကတစ်ခုဖြစ်ခဲ့သည်ထင်ပါတယ်